Pokémon GO na-abanye na Spain | Gam akporosis
Pokémon GO dị ugbu a na Spain
Anyị na-ebu a izu nke ezigbo ara Site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akwụkwọ akụkọ, akụkọ na akụkọ metụtara egwuregwu vidio a nke nwere ike bụrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mee ka ndị mmadụ pụọ n'ụlọ ha wee bụrụ egwuregwu kachasị mkpa na akụkọ egwuregwu vidio na United States, ọkachasị maka mgbasa ya ngwa ngwa. Ugbu a, anyị ga-ahụ etu o si abawanye na mba ndị ọzọ, mgbe ụnyaahụ anyị nụrụ na ọ na-eru Europe mgbe ị rutere na Germany na UK.
Ugbu a ọ dị na Spain, ya mere ị nwere ike ịgafe na Playlọ Ahịa Google maka nbudata. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ichefu ịchọ APK ma nweta mmelite ya site na nchekwa nke ngwa Google na ụlọ egwuregwu vidiyo pụtara.
1 Pokémon aga ugbua na Spain
2 Ma gịnị bụ Pokémon GO?
Pokémon aga ugbua na Spain
Ugbu a ọ bụrụ ahụ ọkụ maka egwuregwu a na-aga ịgbasa dị ka ụfụfụ niile peninshula. Ọ ga-eleta ụsọ mmiri ndị ahụ na ebe ezumike ka ndị ahụ niile na-asa ahụ na ekwentị ha wee chụọ ndị Pokémon ahụ ebe niile. Ihe omuma nke ndi mmadu nke huru ihe mere na mba dika United States, enwere obi ojoo dika ha gha ewere ya na akuku ndia.
Ihe kachasị mma banyere ya ịdị ugbu a na mba anyị bụ nke ahụ anyị agaghị abanye na APKs inwe ike imelite ya, ebe ọ bụ na a ka nwere ọtụtụ ndị ọrụ na-ala azụ ịwụnye ha n'okporo ụzọ a, ma họrọ ịgafe throughlọ Ahịa Google Play maka nbudata na imelite.
Egwuregwu vidio nke anyị nwere ike ịsị na ọ ga-aka akara afọ ndị ọzọ na mgbe afọ gafere ma anyị laghachite na akụkọ ntolite, ọ ga-enweworị ọnọdụ ya, yabụ ọ laghachiri tinye Nintendo na Chakwasa ihie n'ihe metụtara egwuregwu vidio na maka ike ya ịnye ihe dị iche na ebe a na-atụrụ ndụ na ịtụrụ ndụ, dịka Super Mario na ndị ahụ dere mere ka mmadụ niile mata.
Ma gịnị bụ Pokémon GO?
Pokémon GO na-etinye gị n'ọnọdụ nke bụrụ onye nkuzi Pokémon na ị ga-eji ekwentị gị gaa ịchụ nta site n'okporo ámá. Ọ na-eji eziokwu dịwanye elu nke mere na site na igwefoto nke mkpanaka gị ị nwere ike ịchọ Pokémon ahụ nke na-ama gị aka ịchụ nta site na pokéball, ngwa agha gị kachasị mma nke mere na mgbe ị kụrụ ya, ị nwere ike idowe ya n'ime akpa gị ma gaa n'ihu na ịchụ nta.
Ka ị na-inyocha Pokémon GO, ị nwere ike chọta poképaradas, na-ejikarị eme ihe ncheta akụkọ ihe mere eme na oghere dị mkpa n'obodo gị ma ọ bụ obodo gị, ebe ị nwere ike ịnweta ihe n'efu dị ka ndị ọzọ pokéball ma ọ bụ ụdị enyemaka ndị ọzọ. Ọ bụ oghere ndị a ebe ọtụtụ ndị egwuregwu na-aga iji nweta ụfọdụ ihe enyemaka enwere ike ịnweta site na micropayments.
N'ikpeazụ ị ga-enwe ike izute mgbatị, nke bụ ebe ị ga-alụ ọgụ mgbe ị ruru ọkwa 5. will ga-enwe ike ịhọrọ n'etiti isonye na otu odo, acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ ọbara ọbara. Enweghị ọdịiche dị n'etiti atọ ahụ, ọ bụrịrị ihe gbasara ndị enyi gị ịbanye na otu iji merie mgbatị ahụ ebe ị ga-ahapụ otu Pokémon kachasị mma ka ọ nwee ike ichebe mgbatị ahụ site na mwakpo nke ndị otu ndị ọzọ.
Si otu ngwa i nwere ike kwalite Pokémon ma ọ bụ gbanwee ha maka ihe. Egwuregwu vidio nke Nintendo na Niantic Labs kere, nke ahụ ejirila Ingress nwee ezigbo ihe ndabere maka mmalite nke Pokémon GO ka ị nwee ike bụrụ ihe mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Have nwere ebe a obere ndu ndu, Ebe a ndụmọdụ abụọ iji belata oke oriri batrị ihe na-akpata na ọnụ na na post a ụfọdụ aro na belata oriri data nke ụgwọ ọnwa gị.
Finalmente anyị nwere ya na Spain, ya mere Pokémon GO fever malitere ịgbasa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Pokémon GO dị ugbu a na Spain
Huawei kwupụtara Maimang 5 na ngosi 5,5 "1080p, mgbape Snapdragon 625 na 4GB nke RAM
Ọtụtụ emojis ọhụrụ na nke ochie enweela nha anya nwoke na nwanyị